गगन थापाले लगाए संसद खोल्ने नयाँ टेक्निक, कुनै पनि हालतमा संसद चल्न नदिने भनेका ओली के गर्लान् अब ?
पुस २४, २०७८ ९:२०
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद खोल्ने नयाँ टेक्निक बताएका छन् । थापाले एमालेसँग वार्ता गर्ने र सहमतिमा नआए भण्डाफोर गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘अर्को मंसीरसम्म चुनाव गर्नुछ, एक वर्ष संसद चलाउनुछ, एक वर्षसम्म यत्तिकै राखियो भने एक वर्ष पछाडि नेकपा एमालेले नै हामीले भनेको होइन संसद चल्दैन भनेर चल्यो त ? भनेर उसैले भन्छ, के हामी त्यसका लागि कुरेर बस्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।